रेफ्रिजरेटर उत्पाद को ताजिर राख्न को लागी डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये कुनै पनि परिस्थितिमा कहिल्यै राखिदैन। तिनीहरूले स्वाद, वा खराब बानी गुमाउन सक्छन् र मोल्डिभ बन्न सक्छन्, र यो केवल अप्रिय, तर पनि खतरनाक हुन्छ। यहाँ 14 उत्पादनहरू छन् जुन निश्चित रूपमा फ्रिजको शेल्फमा पठाइँदैन!
तरबूजले आफ्नो स्वाद र पोषक तत्वहरूलाई लामो कोठाको तापमानमा राख्छ। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले फ्रिजमा धेरै स्थान लिन्छन्। तिनीहरूलाई राख्नुहोस् त्यहाँ धेरै दिनको लागि काट फाराममा मात्र समझ पर्दछ। उज्यालोसँग पनि गर्नु पर्छ।
ठण्डले केलाको पकाउने प्रक्रिया घटाउँछ, र नमीको कारण तिनीहरूले छिटो घुमाउन थाले। तरबूज र खरगोशको रूपमा, केलाहरूले आफ्नो पोषक तत्वहरू राख्नेछन् र यदि तिनीहरू छन् भने लामो समय स्वाद गर्नेछन्, उदाहरणका लागि, भान्साको तालिकामा।
निस्सन्देह, यो राम्रो आलुमा आलु छोड्न राम्रो छ, अन्यथा यो घुमाउनेछ। यद्यपि, जरा सब्जिहरु को लागि फ्रिज मा धेरै चिसो छ। कम तापमानले ट्युकरमा स्टार्चलाई नष्ट गर्छ, उनीहरूको बनावटलाई तुरुन्तै बनाउँदछ, र आलुको मासुले चाँडै खैरो र कालो रंग प्राप्त गर्नेछ।
प्याज पनि एक ठुलो र सुक्खा ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ, तर फ्रिजमा छैन। उहाँले नमीको कारण मोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पठाउनको लागी उत्पादनले केवल फटाएको फारममा महसुस गर्छ।
आलु र प्याज जस्तै, लसुन नमीले सहन सक्दैन र नरम हुन सक्छ वा उत्तेजक हुन सक्छ। तथापि, यो खुर्सानी र कटा दाँतहरूमा लागू हुँदैन। तिनीहरूलाई ताजा राख्न, फ्रिजमा राख्नुहोस्।
कम तापमानमा, शहद कोठाको कोठा भन्दा धेरै छिटो हुन्छ। तपाईं चाहनुको लागि फ्रिज बाहिर बाहिर भण्डार गर्न नबिर्सनुहोस्। आखिर, हनी लगभग कहिल्यै बिर्सेन।
शीतले टमाटरको स्वादले कम संतृप्त बनाउँछ, र तिनीहरूको बनावट मेला हुन्छ। टमाटरहरू पकाउनुको लागि, तिनीहरू खिचोडमा राख्नु पर्छ। तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि अन्य ठाउँमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईंलाई संदेह छ कि टमाटरहरू ओभरराइप गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई फ्रिजको शेल्फमा पठाउनुहोस्, तर लामो समयसम्म।
8. गरम चटनी
सिरका, धेरै मसालेदार सॉसहरूमा निहित छ, तापनि तापक्रममा ब्याक्टेरिया वा ढाँचाको उपस्थिति पनि रोक्न पर्याप्त हुनेछ। फ्रिजमा राख्ने कुनै बिन्दु छैन। मसाले र मसाले संग शेल्फ मा मसालेदार सॉस राख्न को लागि यो अधिक उपयुक्त छ।
तपाईं क्याचअपसँग समान गर्न सक्नुहुन्छ। सिरका को उच्च सामग्री यो फ्रिज बाहिर बिग्रने अनुमति दिँदैन।
10. कटाई रोटी
ब्रेड फ्रीजर मा पुरा तरिकाले भण्डारण गरिएको छ। यसबाहेक, यो त्यहाँ सँधै छ, यसको सबै उपयोगी गुणहरू हराउनु पर्छ। यद्यपि, फ्रिजमा रहेको, रोटीले छिट्टै मोल्डको साथ ढाक्छ। तपाईं यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो राख्नुहुन्न, तर यस अवस्थामा यो छिटो खानेकुरा राम्रो छ।
चिसोमा, चकलेटले यसको स्वाद खोल्छ। साथै, रोटीमा फैलाउन गाह्रो छ। यदि तपाईं कोठाको तापमानमा Nutella भण्डार गर्नुहुन्छ भने यी समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले तिनीहरूलाई फ्रिजमा राख्नुभएन भने सेबहरू छिट्टै खराब हुँदैन। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले तपाइँको भान्सा कोजियर बनाउनेछन्। तथापि, यदि तपाईंलाई फल खाने केही हप्ता भन्दा बढी चाहिन्छ भने, तिनीहरूलाई फ्रिजमा पठाउनुहोस्। त्यसपछि तिनीहरू अब लामो रहनेछन्।
रेफ्रिजरेटरको शेल्फमा राख्नु हुँदैन र जैतून का तेल हुँदैन, अन्यथा तपाई चाँडै फेला पार्नुहुनेछ कि यो एक तलवार छ र यो स्वादको अप्रिय हो।
निस्सन्देह, यो एक खाद्य उत्पादन छैन, तर ब्याट्रीहरू, अजीब रूपमा पर्याप्त हुन्छन्, अक्सर फ्रिजमा बदल्नुहोस्। अहिलेसम्म, धेरैले विश्वास गर्छन् कि त्यसो गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन विस्तार गर्नेछन्। तथापि, शहरी किंवदंतियों मा भरोसा मत राख्नुहोस्। तपाईंको सबै चार्जर र तारको रूपमा एकै ठाउँमा ब्याटरहरू राख्नुहोस्। सायद तपाईंले अझै पनि प्रयोग गर्ने थाहा छैन। तर मलाई विश्वास गर्नुहोस्, ब्याट्रीहरू लामो समयसम्म समाप्त हुनेछैन, उत्पादन पछि अर्को ठट्टामा अनिश्चितकालिन।
नारियल तेल (चिसो दबाइ): मूल्य, आवेदन। चिसो प्रेस को असफूचित नारियल तेल
खट्टा पनीर पनीर बाट पकाउने: खाना पकाउने व्यञ्जनहरू
संसारमा सबैभन्दा महान् अखरोट
मूंगफली नारियल ग्लेज: शरीरमा लाभ र क्षति
पर्दे लागि Eyelets: सुशील, स्टाइलिश, मूल
चामल केक जापानी आइसक्रिम: नुस्खा, पकाउने सुझाव
कसरी बियर हल्का खोल्न: सुझाव र चाल
जब crocuses रोपेर गर्न - गिरावट वा वसन्त?
स्टेशन, सामारा। समारा ट्रेन स्टेशन। Riverport, सामारा
Sirius काला - अभिनेता र चरित्र
Andrei Balashov: जीवनी, फोटो